Social Media Pundits na-ebibi Corporate Social Media | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 8, 2015 Thursday, June 18, 2015 Douglas Karr
Nwetụla mmejọ na soshal midia? Emeela m ole na ole (ma nọgide na-eme ha). Ọ bụghị nnukwu blunders, ma blunders dịghị ihe na-erughị. Emeela m okwu na-enweghị isi nke a gaara ezere. M na-akatọ ndị mmadụ na m na-akwanyere ùgwù ya mere ha chere na m bụ butthead. M na-eke ndọrọ ndọrọ ọchịchị - nsọ dị nsọ nke mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya. M na-agwakọta azụmahịa na obi ụtọ na akaụntụ m niile na nke onwe m.
Aghaghị m inu na social media.
Would ga - eche… mana enwere m ezigbo ahụike na ndị ọhụụ ọhụụ na mmekọrịta azụmaahịa kwa ụbọchị. Kwa ndị ọkachamara, m na-eme ihe niile dị njọMa ọ na-arụ ọrụ. Ọbụna onye ọbịbịa, atụmatụ ndị ahụ DK New Media Mbupu maka ụlọ ọrụ na-ekepụta ezigbo nloghachi na itinye ego. Ihe ụfọdụ ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta na-ezere.
Edeela m tupu oge ahụ nghọta na eziokwu ya mere agaghi m eti ịnyịnya nwụrụ anwụ ebe a (uh-oh… anaghị akpọ PETA). Mana iwe na-ewe m mgbe m hụrụ onye na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya kpọrọ ụlọ ọrụ ọrụ maka ịmehie amaghị ama.
Mbibi kachasị ọhụrụ bụ Coca-Cola. Ha mepụtara bot bot maka ha #MeeIke Obi uto mkpọsa, na-akọwa nzube ya na nkwupụta mgbasa ozi:
Gbanwee nsonaazụ na-ezighi ezi na-emetọ mgbasa ozi mgbasa ozi na ikwu okwu na ntanetị
Chei… ụlọ ọrụ na-achọ iweta ntakịrị obi ụtọ n'ụwa. Chọpụta ọ bụ a mbọn mmega otú e nwere ihe a bit nke ahịa atụ ogho na ya. Mana nke ahụ bụ atụmatụ atụmatụ aha Coke ruo ọtụtụ iri afọ visible ga-ahụ anya ebe enwere ezigbo ncheta. N'ihi ya egwu, nri?
Gawker's Adam Pash, kere Twitter bot iji tọọ akara si na Adolf Hitler's Mein Kampf ma jikọta ha na akara #MakeItHappy. Atụmatụ ahụ gara nke ọma. O kpalitere bot nke Coca-Cola iji gbasaa ederede Hitler ma mepụta foto mara mma site na mkpado #MakeItHappy ruo ọtụtụ awa.
Gawker zitere stunt ahụ na lovedntanetị hụrụ ya n'anya. Coke weghaara bot.
Gịnị meziri? Ndị mgbasa ozi soshal midia weputara Coca-Cola maka mmejọ mgbasa ozi ha. Agụrụ m ya na ndepụta m niile - nke jupụtara na ndị enyi na ndị ọrụ ibe m na-akpọtụrụ ụlọ ọrụ na usoro mgbasa ozi mmekọrịta ha. Mee nyocha nke #MakeItHappy na Twitter na ị ga-ahụ ihe m na-ekwu. Kpọrọ… ha kpara ha.
Otu afọ gara aga, emere m ihe ngosi na Social Media Marketing World ebe m depụtara isi ụlọ ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi ọ bụla edepụtara na saịtị ụlọ ọrụ na m gosipụtara na ọ dịghị otu onye nwere mmetụta na-adịgide adịgide na ika ahụ. Kpọrọ - ọ bụghị otu!
Ndị isi na-atụ ụjọ mmejọ nke mgbasa ozi mmekọrịta. Know ma ihe kpatara ha ji atụ ụjọ mmejọ nke soshal midia? N'ihi na onye ọ bụla na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya na-agba ndị ọrụ ha ume ma na-eche atụmatụ ọ bụla ha tinyere nke mechara mehie. Ọ bụghị nsonaazụ mkpọsa ahụ merụrụ aha ụlọ ọrụ ahụ ahụ, ọ bụ ndị nta akụkọ na ndị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịta na-eme ka ihere mee ha.
Coca-Cola emeghị ihe ọ bụla ezighị ezi site na mkpọsa Twitter bot ha nke kwesiri mmeghachi omume ndị pundits zara ya. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iburu onye ọ bụla rụọ ọrụ, buru Gawker gaa na ọrụ. IMO, Adam Pash bu onye obi uto maka iji obi uto mee ihe na mgbasa ozi na Gawker maka itu onu banyere ya ka ha nwee ike igwu egwu dika otutu ndi umuaka. Enwere m ike iche na ha na-achị ọchị dị ka okwu mbu nke Hitler mere na ndepụta Coke nke Twitter.
Hey Gawker… tolite.
Ndụmọdụ m nye ụlọ ọrụ
Oge erugo ka ị ga - eji mkpari a gaa iwe. Chebe ụdị gị, dozie usoro gị, ma gaa n'ihu. Mgbanwe dị ịtụnanya n'ahịa na mgbasa ozi nke mgbasa ozi mmekọrịta ewetara bụ ikike anyị nwere iji kpọtụrụ ndị ahịa ozugbo. Wa na-arịọ maka nghọta na anya n'ime ụlọ ọrụ ha na-arụkọ ọrụ ka ha wee nwee obi ụtọ na ego ha na-emefu bara uru. Na nghọta na-abịa n'ihe ize ndụ, ọ bụ ezie. Are ga-emehie ihe. Ma nke ahụ dị mma!
I nweghi ike ịkọ na ụfọdụ dick na-aga mbanye gị obi ụtọ na-elekọta mmadụ media mkpọsa na Hitler ruturu n'agbanyeghị otú ike ị na-agbalị. Inwe uzo pụtara na ị nwere ike ịnọ n'ọnọdụ ndị dị ka nke a, mana dịka ị mepụtara usoro iji gbasaa mkpọsa ahụ, ị ​​nwere ike ịmepụta atụmatụ maka mgbe ihe na-ezighi ezi.
Ọ ga-amasị m ịhụ nzaghachi ọha na eze site na Coke nke gwara ụwa na omume Gawker bụ omume nke mkpọsa ha na-anwa imeri. Aga m ekwupụta mwute na ụlọ ọrụ mgbasa ozi ga-aga ụdị adịghị ike a iji mee ihere. M ga-agbada mkpọsa ma gwa ndị mmadụ dee Gawker ma gosipụta mmechuihu ha.
Enwere emehie ihe mgbasa ozi na ụlọ ọrụ nwere ike izere, mana ịghara ịgbanahụ iwe nke ndị nzuzu na ịntanetị abụghị otu n'ime ha.
Ndụmọdụ M na Social Pundits
Mgbe ị na-ewere ụdị ọrụ dị ka nke a, ị na-ebibi ụlọ ọrụ nke gị. Jọ gị na mkpọpụta nke otu esi emepụta ihe anaghị enyere gị aka. Ọ na-eme ka ụlọ ọrụ na-arịwanye elu ịhapụ ịgba nghọta na ịlaghachi na nzuzo n’azụ akara ngosi, nkwupụta okwu na ire ahịa otu ụzọ.
Ọ bụrụ na m bụ nnukwu akara, anaghị m ekwu eziokwu ma ọ bụrụ na mụ na onye na-ahụ maka mgbasa ozi na-elekọta mmadụ na-arụ ọrụ wee wụsa ụlọ ọrụ ịntanetị. Mgbasa mgbasa ozi na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ kachasị mma na-ekwurịta okwu na ọha mmadụ, ọ bụghị mgbe ha ga-anọdụ ala n'ime ụlọ na-egwu egwu ọ bụla na-atụ egwu blog ọzọ ị ga-ede mgbe ihe na-adịghị mma. Kwụsị ya.
Kwụsị ire ọrụ gị na ụjọ ma ree, kama, na nkwa nke otu ụlọ ọrụ ga-esi gbanwee akara ha ma wuo ndị ahịa ha obodo.
Tags: Adam Uhiecoca-colaCokegawkerihe na-emendị na-ahụ maka mgbasa ozi mmekọrịtaemehie ihe mgbasa ozielekọta mmadụ media punditsbot bot twitter
Feb 9, 2015 n’elekere 9:55 nke abali
Kpamkpam kwenyere n'ebe a. Gawker bụ jerk abụghị Coke. N'ezie, ịrụ ọrụ maka Gawker nwere ike ịbụ ntaramahụhụ n'onwe ya.
Feb 9, 2015 n’elekere 11:09 nke abali
Akwa isiokwu. Enwere m mmasị na eserese - ihe ọ bụla nke mpempe akwụkwọ nkwado kwesịrị ikwurịta okwu na-enweghị okwu ederede. Bravo.
Echere m na otu n'ime ihe ịma aka nke mmadụ mgbasa ozi bụ compartmentalization, nke bụ na-ekwu na e nwere ahịa, technology, imewe, copywriting, na na; niile disparate ọcha nke nkwukọrịta na ihe ọmụma ọha mmadụ dị na nwata.
Mgbasa ozi Coke na-egosi usoro na-atọ ụtọ, mana dịka onye na-eyi ọtụtụ okpu na mpaghara nkwukọrịta, gụnyere onye bi na teknụzụ, enwere m ike ịgba akaebe na otu eziokwu dị mfe mgbe m na-alụ ọgụ megide anụ ọhịa mgbasa ozi mmekọrịta: ọ dịghị, mgbe ị ga-akpaghị aka na nkwukọrịta gị ọrụ mkpọsa. Leaving na-ahapụrụ ha oghere. Ọ bụ ihe dijitalụ nke ịlụ agha na-enweghị ihe mgbochi - a ga-enwe ọnụ ọgụgụ dị elu ma ọ bụrụ na ị nwere profaịlụ dị elu. Ọ bụ thentanetị, ka emechara: Amaonye, ​​Siria Electronic Army, Lizard Squad, ndị otu hacker dị iche iche na-ezubere iche mgbe ụfọdụ ụlọ ọrụ comms. Onye a sitere na mkpuru obi na Gawker bia.
Ma mgbe ahụ, n'ezie, enwere Bill Cosby na-elekọta mmadụ mgbasa ozi fiasco. Chaị.
Izobe ha, yiri ịta ụta nkịta maka ị banye n'ime mkpofu ahịhịa: ọ bụ n'ụdị ha. Ma ọ bụrụ na ịhapụ mkpuchi ahụ, nwere ike - ọ dị nwute (na m na-ekwu nke ahụ n'eziokwu - o kwesịghị ịbụ ụzọ a, mana ọ bụ), nke ahụ bụ ihe ị ga - enweta: ọgba aghara. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ agụmakwụkwọ niile. Ozugbo ị matara ọdịdị nke ihe, o yikarịrị ka ị ga-aghọtakwu otu esi emeso ya n'ọdịnihu. Ikekwe ọ ka mma ka ị gbasaa mkpọsa site na uwe mgbochi (iji mee ihe atụ) ma soro ụmụ mmadụ dozie ya (n'ezie, nke ahụ na-enwekarị nsogbu ndị ọrụ arụnyere, mgbe ahụ).
Ọ bụ ihe nnyapade wicket, ọwa a. Hapụ oghere ma ị ga - ahụ ngwa ngwa mmadụ nwere mpempe akwụkwọ dijitalụ nke nwere aha akara ya, onye ọzọ na - ata ahụhụ na Internetntanetị, akụkọ ịdọ aka na ntị ọzọ maka nkwukọrịta.
Daalụ maka ịme ka m tụlee jiometrị ndị ọzọ nke ọnọdụ a na edemede gị.
Feb 9, 2015 na 1:41 PM
Feb 9, 2015 na 2:10 PM
Lee ume ọhụrụ a - Chaị! #ShameonYaGawker
Ọ bụ eziokwu na ebe ndị mmadụ na-elekọta mmadụ na-ekwu okwu ọma banyere eziokwu na nghọta, ha na-emegide okwu ọ bụla na-esemokwu esemokwu - amaara m na m na-ezere nsogbu ndị a, yabụ na-atụnyere onye dị ka gị maka iguzo maka ihe ị kwenyere # AHU
Feb 9, 2015 na 5:00 PM
Ezi post, achọrọ m ịmata ihe ị chere maka obere tinye na Gawker.
Feb 9, 2015 na 8:12 PM
Echere m na Gawker bụ a shitty ika na abụghị enyi gị. 🙂